Dalxiiska Sandals-ka ayaa Soo Bandhigay Sandals-ka Cusub ee Bahamiyaanka ah ee Dib loo Malay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hoteelada & Dalxiisyada » Dalxiiska Sandals-ka ayaa Soo Bandhigay Sandals-ka Cusub ee Bahamiyaanka ah ee Dib loo Malay
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • kariska • dhaqanka • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • Wararka Raaxada • jiga • Aroosyada Jaceylka Malabka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Ka dib isbeddel malaayiin doollar ah, Sandals Resorts International (SRI) waxay daaha ka qaaday qorshayaasha maanta ee gebi ahaanba dib-u-cusbooneysiintii meel-marin loo dhan yahay oo ku taal Nassau, Bahamas, Sandals Royal Bahamas oo cusub. Naqshadeynta si loogu dabaaldego ruuxa si fudud u socda ee Bahamas oo leh waayo-aragnimo maxalli ah oo la dhiirigeliyay iyo hab feker leh, hab casri ah oo raaxo leh, hoggaamiyeyaasha jacaylka iyo jacaylka Sandals waxay dib u furi doonaan hudheelkooda abaalmarinta, isboortiga iyo jasiiradda gaarka ah xilliga jiilaalka ee bilaabmaya Janaayo 27, 2022.
Qorshayaasha Sandals Royal Bahamian ee dib loo habeeyay ayaa shaqaynayey ku dhawaad ​​saddex sano.
Dalxiiskan dib loo cusboonaysiiyay waxa uu dib ugu furmi doonaa hoyo cusub oo raaxa leh, khibrado deegaanka lagu dhiiri galiyay, cunto la xoojiyey, iyo in ka badan.
Nashqadaha cusub dhamaantood waa qayb ka mid ah istaraatiijiyad aad u weyn oo ururka oo dhan ah si ay si dhab ah uga tarjumayso meelaha gaarka ah ee Kariibiyaanka.
"Waxaan kor u qaadaynaa raaxada waxaanan ku tiirsanahay ruuxa si fudud u socda Bahamas The si aan u soo bandhigno waayo-aragnimo cajiib ah oo dhab ah oo sida aan jecelnahay in aan niraahno, jacaylku wuu fududeeyaa,” ayuu yiri Guddoomiyaha Fulinta SRI Adam Stewart. "Laga soo bilaabo tuulo cusub oo guryo gaar loo leeyahay oo midab leh iyo Coconut Grove, qolkayaga cusub ee bannaanka iyo madadaalada ilaa jasiiraddeena xeebaha ah oo loo beddelay gabbasho jacayl, daqiiqad kasta, goob kasta oo taabasho martida ah iyo khibrad kasta waxay ka kooban tahay tan quruxda badan. meesha loo socdo. Ma sugi karno inaan martida ku soo celino Nassau iyo kuwa cusub Sandals Royal Bahamiyan. ”
Sida laga soo xigtay Guddoomiyaha Fulinta SRI Adam Stewart, qorshayaasha Sandals Royal Bahamian ee dib loo habeeyay waxay ku jireen shaqada ku dhawaad ​​​​saddex sano waxayna qayb ka yihiin istaraatiijiyad aad u weyn oo ururka oo dhan ah si ay si dhab ah uga tarjumaan meelaha gaarka ah ee Kariibiyaanka halkaas oo Sandals Resorts ay ka shaqeyso naqshad, badeecad. bixinta iyo qaabka adeegga raaxada.
Dib loo maleeyay abaalmarin abaalmarin ah Sandals Royal Bahamian ayaa ka muuqan doona:
All-New Suites & Tuulada Island
Sandals Royal Bahamian waxa ay sare u qaaday kala-doorashooyinka hoyga iyada oo lagu daray suuldaha webiga caanka ah ee East & West Bays ee dhawaan la magacaabay, in ka badan 200 qolal iyo qolal si buuxda loo cusboonaysiiyay iyo kuwa cusub. Tuulada Island. Tuulada cusub ee midabada leh ayaa waxaa dhiiri galiyay jasiiradaha Bahamian waxayna ka kooban yihiin guryo fiilo ah oo mid walba loogu magac daray jasiirad ku taal Bahamas oo leh barkad gaar ah.
Ku soo kordhin cusub oo guriga waa Qumbaha Grove, aag nasasho oo ballaadhan oo fidinaysa garaadka xeebta Bahamian ilaa bartamaha goobta loo dalxiis tago habeen iyo maalinba. Hooska calaacalaha qumbaha, goobta cusub waxay ku faantaa xulashooyin fadhi qurxoon, muusig toos ah & madadaalo, muuqaalo aan la mid ahayn oo badda ah iyo 3 baabuur oo cunto ah oo cusub. Dhammaan Sandals 'marka hore,' martida waxay ka qaadan karaan daweyn macaan ama kafeega Macmacaanka n TingsKu raaxayso cunnada isku dhafka ah ee Bahamian-ka ee deegaanka lagu dhiirrigeliyay iyo cunnada badda ee cusub Boqorada Coco, ama dooro talyaaniga classic at Bahama Mamma Mia.
Hideaway Island Private
Xeebaha cidlada ah iyo reefs shacaab midab leh ayaa sugaya jasiiradda gaarka ah ee loo dalxiis tago ee gaar loo leeyahay, kabahaaga Cago-cad. Lammaanuhu waxay u dhoofi karaan marinka gasiiradda oo ay maalinta ku qaataan dib u xidhidhaynta xeebaha deggan ee leh baarka xeebta, fadhi qurxoon, qubays bannaanka iyo makhaayad cusub, Guriga Aralia, u adeegida cunto badeed cusub doon ilaa miis iyo macaan Caribbean sax ah.
Baaritaanada Hore & Dhaqanka Fiidnimada Dhaqanka
Kuwa hore u yimi, Sandals Royal Bahamian waxay soo dhawaynaysaa hubinta hore ee barnaamijyadooda cusub, Goosashada. Markay yimaadaan, martigeliyaha u go'ay ayaa martida u hogaamin doonta qolka nasashada oo ay gacanta ku hayaan saxeex cocktail ah si ay kor ugu kiciyaan oo ay toos ugu toosaan barkadda iyada oo la daryeelayo inta kale. Qorrax-dhaca, lamaanayaashu waxay ka qaybqaadan karaan caado dhaqameed oo afuufis ah oo la yiraahdo si ay u soo dhaweeyaan jacaylka iyo nasiibka wanaagsan. Cibaadada waxaa weheliya rake iyo muusik xoqid iyo is biirsaday Bahamian oo leh neecaw badeed.
Ikhtiyaarada Cunto Cusub
Sandals Royal Bahamian waxay soo bandhigi doontaa shan makhaayadood oo cusub marka uu furmo jiilaalkan oo ay ku jiraan Baal cunnada Faransiiska ee quruxda badan; dhaqameed British Pub Luul Boqorada; Kanoo cuntada u dabbaaldegta gobolka Kariibiyaanka, Butch's Island Chop House loogu talagalay isteek-gacanta lagu gooyay, kalluunka kalluunka iyo cuntada badda ee loo diyaariyey in lagu dalbo iyo boos sushi oo cusub Soy.
Laga soo bilaabo maraqa xeebta ee caadiga ah ee u adeegaya burgers macaan iyo saladh cusub ilaa udgoonka udgoonka ee xawaashka qalaad iyo raaxaysiga Japan ee si fiican loo dubay, Sandals Royal Bahamian-ka cusub wuxuu ku faani doonaa wadar ahaan 13 doorasho cunto.
Si aad wax badan u barato oo aad u qabsato joogitaanka Sandals Royal Bahamian cusub, booqo sandals.com/royal-bahamian/renovations.
Goobaha Sandals® waxay bixiyaan laba qof oo jacayl ah kuwa ugu jacaylka badan, waayo-aragnimada fasaxa ee raaxada ee Kareebiyaanka. Iyada oo leh goobo xeebeedyo qurux badan oo 15 ah oo ku yaal Jamaica, Antigua, Saint Lucia, Bahamas, Barbados, Grenada, iyo 16th Goobta u imaanaysa Curacao Guga 2022, Goobaha Dalxiis ee Sandals waxay bixisaa ka-saarisyo ka tayo badan shirkadaha kale ee dalxiis ee meeraha ku yaal. Saxiixa Jacaylka Nest Butler Suites® ee ugu dambeeya asturnaanta iyo adeegga; kalkaaliyeyaal ay tababareen Guild of Professional English Butlers; Red Lane Spa®; 5-Star Global Gourmet ™ cuntada, hubinta khamriga-shelf-sare, khamri qaali ah, iyo maqaayado qaas ah oo qaali ah; Xarumaha Aqua oo leh aqoonsi iyo tababar khabiir ah PADI®; dhakhso Wi-Fi laga bilaabo xeebta illaa qolka jiifka iyo Kabaha kabaha ee Aroosyada Lahabeyn karo dhammaantood waa kuwo gaar loo leeyahay. Dalxiisyada Sandals waxay u dammaanad qaadayaan martida nabadgelyo maskaxeed laga bilaabo imaatinka iyo bixitaanka Borotokoollada Platinum Sandals ee Nadaafadda, Tallaabooyinka caafimaadka iyo badbaadada ee shirkadda ee la xoojiyey ee loogu talagalay in lagu siiyo martida kalsoonida ugu badan marka ay fasaxa ku qaadanayaan Kariibiyaanka. Sandals Resorts waa qayb ka mid ah Sandals Resorts International (SRI) oo qoysku iska leeyihiin, oo uu aasaasay Gordon “Butch” Stewart, oo ay ku jiraan Goobaha loo dalxiis tago ee Karibiyaanka, waana shirkadda hormuudka u ah dalxiiska loo dhan yahay ee Kariibiyaanka. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Farqiga Sandals Resorts Luxury Included®, booqo sandals.com. www.sandal.com.